ग्यालक्सी नोट:: एभ्लेक्स द्वारा प्रकट गरिएका सुविधाहरू Androidsis
सामसु ofका सबै भन्दा वफादार फ्यानहरू, र जसले विश्वास गर्छन् कि कम्पनी नयाँ अवसरको योग्य छ किनकि यसको सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस and र ग्यालक्सी एस ge एजको प्रस्तुतीकरणको साथ आविष्कारको सर्तमा टाउकोमा कीलमा हिट भएको कारण जान्न उत्सुक छन्। यो के हुनेछ। कोरियाली कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो टर्मिनलको नयाँ पुस्ता। हामी पाठ्यक्रम को सन्दर्भ सैमसंग गैलेक्सी नोट 5।
डेल सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट,, हामीले पहिले नै हाम्रो ब्लगमा लम्बाइमा कुरा गरिसकेका छौं। वास्तवमा, हामीले कोरियनको बारेमा केहि उल्लेखनीय चुहावट सन्दर्भ गरेका छौं। विशेष रूपमा, हामी टिप्पणी गर्दछौं कि सायदको नीति नोट5युरोप मा प्रक्षेपण पूर्ण परिवर्तन गर्नुहोस्। उही समयमा, हामीले केहि देख्यौं छविहरू जुन नयाँ ग्यालक्सी नोट of को सौंदर्यशास्त्रको साथ टाउकोमा नेलमा हिट गर्न सक्दछन्.
इभिलेक्सले ग्यालक्सी नोट of का स्पेसिफिकेसन लीक गर्दछ
व्यक्तिहरू जुन हामीले तपाईंलाई तल देखाउँदछौं अनुमान गरिएको विशेषताहरू हुन् जसले परिभाषित गर्दछ ग्यालेक्सी नोट 5। वास्तवमा, यसमा पहिले धेरै नोटहरूको दायराको नयाँ टर्मिनलको विशिष्टताहरू के हुन सक्दछ भन्ने थुप्रै लिस्टिंगहरू छन्। यद्यपि यस अवस्थामा, इभ्लिक्स प्राय जसो सही हुन्छ यसले फिल्टर गर्ने काममा उनीहरूले विश्वसनीयताको सर्तमा के कमाउँछन्। के तपाईं अर्को सामसु terminal टर्मिनल कस्तो देखिन्छ भनेर एक हेराइ हेर्न चाहनुहुन्छ?
.5.66..2560 इंच क्वाड एचडी डिस्प्ले (२1440० x १XNUMX० पिक्सेल)
Exynos 7420 57२० SoC प्रोसेसर: Quad Core २.१ GHz Cortex A2.1 + C Core 4GHz Cortex A53
आन्तरिक भण्डारण मेमोरीको GB२ जीबी
१ me मेगापिक्सल रियर मेन क्यामेरा
एन्ड्रोइड .5.1.1.१ ललीपप अपरेटिंग प्रणाली
माइक्रोएसडी अनुपस्थित मार्फत मेमोरी विस्तारको सम्भावना।
यस अवस्थामा यो आश्चर्यजनक छ कि कोरियनले आफ्नै प्रोसेसरलाई फेरि भेला गर्नेछ, किनकि यो अघिल्लो पुस्तामा भयो, यसैले प्रतिस्पर्धाको बारेमा रहेको विवादलाई सुल्झाउँदछ। यसरी, Samsung, लागत बचत गर्नुका साथै यसको उत्पादनको नाफा बढाउनुको साथसाथै यसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि यसको कम्पोनेन्टहरू बजारमा राम्रोसँग परिचित छन् र सम्भावित खरीददारहरू हुन सक्छन्।
अर्कोतर्फ, सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट,, यो विस्तार योग्य मेमोरीको साथ आउँदैन, जुन पहिलेका अवसरहरूमा आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि यस्तो देखिन्छ कि कोरियनले यसको उपयोग उपकरणहरू प्रयोग गरेर यसको समाधान गर्न चाहान्छ जुन डाटा भण्डारणलाई वायरलेस रूपमा अनुमति दिन्छ। जसरी इभिलेक्सले यसको परिभाषित गरेका सुविधाहरूमा खसालिरहेको छ, हामी हाम्रो आफ्नै एक्सेसरी पनि फेला पार्न सक्छौं जुन प्याकमा बेचिन्छ, वा नोट that र आधिकारिक स्टोर मार्फत अन्य टर्मिनलहरूको लागि उपलब्ध छ।
बाँकीको बारेमा ग्यालक्सी नोट technical का प्राविधिक सुविधाहरू, त्यहाँ खास गरी उल्लेखनीय केहि छैन। दुबै प्रोसेसर चश्मा अपेक्षा गरिएको थियो, र्यामको स्तर जस्तै। यद्यपि यो एकदम शक्तिशाली देखिन्छ, नोट is को दायराभित्रै, हामीले थोरै अपेक्षा गरेनौं। क्यामेराको मामलामा, त्यहाँ केहि नयाँ छैन र तिनीहरूले अघिल्लो संस्करणको लाइन कायम राख्छन्। यो हेर्न आवश्यक हुन्छ कि सेन्सरहरूको हिसाबले त्यहाँ केहि नयाँ छ कि प्रयोग गरिएको छ र छविहरू क्याप्चर सुधार गर्दछ।
यद्यपि इभेलिक्सले यसलाई निर्दिष्ट गर्दैन, यो आशा गरिन्छ कि अघिल्लो संस्करणहरूमा जस्तो भयो, त्यहाँ धेरै मेमोरी भण्डारण विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछन्, र ती मूल्यहरू तिनीहरूको आधारमा परिवर्तन हुनेछ। सिद्धान्त जुन त्यहाँ कुनै संस्करण हुनेछ ग्यालक्सी एस regarding को सम्बन्धमा हामीले पहिले नै वर्णन गरिसकेका धेरै बजारमा १२128 जीबी पुष्टि हुन बाँकी छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » ग्यालक्सी नोट:: एभेलिक्सद्वारा प्रकट गरिएका सुविधाहरू
वनप्लसले तेस्रो स्मार्टफोन तयार गर्दछ जुन वर्षको अन्त्य अघि आउनेछ, वनप्लस मिनी?